I-China 3″ i-resin diamond polishing pad emanzi yokupholisha ukhonkolo I-Manufacture and Factory | Bontai
Okubalulekile: I-Velcro + resin + idayimane
Ama-Grits: 50# kuya ku-3000# etholakalayo
Indlela yokusebenza: Ukupholisha okumanzi
Ubukhulu: 3" (80 mm)
Isicelo : Okokulungiselela ukhonkolo nokubuyisela uhlelo lokupholisha
3" iphedi yokupholisha idayimane ye-resin emanzi yokupholisha ukhonkolo
Okokhonkolo opholishayo omanzi kanye nendawo ephansi ye-terrazzo
1. I-resin eqinile kanye nenhlanganisela yedayimane.
2. Ukuphumelela ohlelweni lokupholisha itshe kanye nokhonkolo.
3. Ama-granularities namasayizi ahlukene atholakalayo
4. Intengo yokuncintisana kanye nekhwalithi ephakeme.
5. Iphakheji elihle nokulethwa okusheshayo.
6. Isevisi enhle kakhulu.
Amaphedi okupholisha aphansi edayimane amanzi okugaya nokupholisha igwadle, imabula, ukhonkolo, netshe lobunjiniyela.
Iphedi yokupholisha phansi eboshwe nge-resin iyithuluzi lokupholisha phansi elisetshenziswa ngemva kokusebenzisa ithuluzi ledayimane eliboshwe ngensimbi, osayizi bokusanhlamvu bedayimane basukela ku-50#-3000#, inani lokusanhlamvu libe likhulu, umphumela uba ngcono.
Iphedi lokupholisha idayimane elimanzi lenziwe ngempushana yedayimane yekhwalithi ephezulu kanye ne-adhesive ye-resin eyingqayizivele, eyenza iphedi lokupholisha libe namandla abrasive anamandla, ukumelana nokugqoka okuphezulu nokuphila isikhathi eside. Iphedi yokupholisha idayimane inejubane lokupholisha ngokushesha, ukukhanya okuphezulu, lapho igaya futhi ipholishwa, iphedi yokupholisha ngeke ingcolise into. Yenziwe ngeteyiphu enamathela enayiloni yekhwalithi ephezulu, enamathiselwe ngokuqinile futhi engasetshenziswa kabusha futhi engonakali kalula. Indwangu iphrintiwe nge-granularity yomkhiqizo ukuze ihlonzwe ngokushesha futhi kube lula ukuyisebenzisa.
Okwedlule: 3”I-concrete Floor polishing Hybrid pad
Olandelayo: 27inch Ukushiswa kwamaphedi okupholisha idayimane ukwenza ubuso bukhanye kakhulu
Iphedi lokupholisha likakhonkolo le-Terrazzo
I-Diamond Hand polishing Pads for Stone
Izandla zokupholisha amaphedi
Amaphedi Wokupholisha Amaselula
Resind Bond Ukupholisha Pad
Ithuluzi le-Stone Diamond
Iphedi yokupholisha ngamatshe
4″ 100mm Iphedi Ye-Diamond yokupholisha i-Resin ye ...
3″ Iphedi yenguquko yedayimane yethusi yebhondi...